ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Current Transformer ( CT ) အကြောင်း လေ့လာရန် ( အခြေခံ )
Current Transformer ( CT ) အကြောင်း လေ့လာရန် ( အခြေခံ )
ကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့ အပိုင်းအစလေး တခုဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်စီးနေတဲ့ လမ်းကြောင်းတခုမှာ Current နည်းနည်းသာ စီးနေရင်တော့ တိုက်ရိုက် တိုင်းတာနိုင်ပေမဲ့၊ Current အများကြီး စီးနေရင် တိုင်းတာနိုင်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ Transformer ကို Current Transformer လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Transformer ရဲ့ Primary Current အများကြီး စီးနေချိန်မှာ Secondary Current ငယ်သွားအောင် Turn Ratio နဲ့ အချိုးကျ လျော့ကျစေခြင်း အားဖြင့် တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Secondary Current ကို5A နဲ့ 1 A များကို စံအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်၊5Ampere CT ကို CT နဲ့ Relay/Meter ကြားအကွာအဝေး 25 meter ထက် မပိုလျှင်သာ သုံးသင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ Measuring နဲ့ Protection ကိစ္စ ၂ မျိုး အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
CT တလုံးရဲ့ Primary Rated Current ကို Rating တမျိုးထဲသော်လည်းကောင်း၊ တမျိုးထက် ပို၍သော်လည်းကောင်း မှာယူ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ -
CT တလုံးရဲ့ Secondary Winding ကို မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ လုပ်ငန်းအရေအတွက်နဲ့ အမျိုးအစား (Metering or Protection) အလိုက် one winding မှသည် five winding အထိ မှာယူ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဥပမာ -
CT နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ International Standard များက IEC 60044-1 နဲ့ IEEE C57-13 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
CT တလုံးရဲ့ အပြင်နှင့် အတွင်း အစိတ်အပိုင်းများပြပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
CT ရဲ့ Nameplate ကို လေ့လာလို့ရအောင် နမူနာပုံနဲ့ ရှင်းပြထားတာလေး ဖြစ်ပါတယ်။
CT ရဲ့ Accuracy Class များအကြောင်း
CT ရဲ့ Secondary Winding တွေကို Measuring နဲ့ Protection အတွက် မိမိသုံးမည့် ကိစ္စရပ်တွေအလိုက် Accuracy Class ကို သတ်မှတ် ရွေးချယ်ရပါတယ်။
ပထမ Measuring CT Winding တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ IEC Standard မှာသုံးတဲ့ Accuracy Class အခေါ်အဝေါ်၊ သုံးစွဲမည့်ပစ္စည်းနဲ့ Class ရဲ့ ညွှန်းဆိုချက်တွေ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် -
CT ရဲ့ Accuracy Class 1 က Rated Current နဲ့ အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ Rated Error 1 % ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
Accuracy Class အလိုက် သင့်တော်တဲ့ Application တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်-
Class Suitable Application
0.1 for precision measurement
0.2 for precision measurement
0.5 for high grade kilowatt-hour meter for commercial
1 general industrial measurement
3 general industrial measurement
5 approximate measurement
Protection CT Winding တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ IEC Standard မှာသုံးတဲ့ Accuracy Class အခေါ်အဝေါ်၊ သုံးစွဲမည့်ပစ္စည်းနဲ့ Class ရဲ့ ညွှန်းဆိုချက်တွေ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာ Class 5P10 ဆိုရင် CT ရဲ့ Accuracy က 5, Accuracy Limit Factor (ALF) က 10 ဖြစ်ပါတယ်။ CT Secondary မှာ Rated Burden တပ်ထားပြီး၊ Primary side မှာ Rated Current ရဲ့ ၁၀ ဆ ဖြတ်စီးမယ်ဆိုရင် Rated Error 5% ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
Accuracy Limit Factor 10 ဆိုတာ Primary side မှာ Rated Current ရဲ့ ၁၀ ဆထက် ပိုစီးချိန်မှာ Secondary Current ဟာ အချိုးကျ မှန်အောင် မတိုင်းနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ Accuracy Limit Factor ရဲ့ Typical Value များက 5, 10, 15, 20, 30 တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
5P Zero sequence protection (Earth Fault protection)
5P Differential protection
5P, 10P Impedance relay (Distance protection)
5P, 10P Overcurrent protection
CT ရဲ့ Burden များအကြောင်း
CT ရဲ့ Secondary Winding တွေကို Measuring နဲ့ Protection အတွက် အသုံးပြုရာမှာ မိမိသုံးမည့် ကိစ္စရပ်တွေအလိုက် Control Cable, Measuring Meter, Protective Relays တွေ တပ်ဆင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပစ္စည်းများရဲ့ ခုခံမှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ VA တန်ဖိုးများပေါင်းလာဒ်ကို Burden လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Burden of Measuring CT = Burden of Control Cable + Burden of Meters
Burden of Protection CT = Burden of Control Cable + Burden of Relays
Control Cable ရဲ့ Burden ကိုတွက်ဖို့ အောက်ပါအချက်များ လိုပါတယ်-
၁။ CT နဲ့ Relay ကြား ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Control Cable အရှည်
၂။ CT Secondary Winding Connection ပုံစံ
၃။ Control Cable ကြိုး အရွယ်အစား
CT Secondary Winding မှာ Control Cable ဆက်သွယ်တဲ့ Connection ပုံစံက အောက်ပါ ပုံအတိုင်း ၂ မျိုးရှိပါတယ်-
ဘယ်ဖက်ပုံအတိုင်း တည်ဆောက်ရင်6wire connection လို့ခေါ်ပြီး၊ ညာဖက်ပုံ အတိုင်း တည်ဆောက်ရင်4wire connection လို့ခေါ်ပါတယ်။
6 wire connection ဖြစ်ခဲ့ရင် CT နဲ့ Relay ကြား ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Control Cable အရှည်ရဲ့ ၂ ဆ (အသွား+အပြန်) ကို အခြေခံတွက်ရပါတယ်။
4 wire connection ဖြစ်ခဲ့ရင် CT နဲ့ Relay ကြား ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Control Cable အရှည်ရဲ့ ၁.၂ ဆ (common neutral type) ကို အခြေခံတွက်ရပါတယ်။
CT နဲ့ Relay ကြား Control Cable အရှည် - 40 meter
Control Cable ကြိုး အရွယ်အစား -4sq. mm (Copper)
Secondary Winding Connection ပုံစံ -4wire connection
Relay ၏ Burden - 20 mOhm
CT Secondary Rated Current -5Amp
Take, resistivity of copper (75 deg. C) = þ = 0.0216 µOhm-m
CT Secondary Burden ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲ
4 wire connection ကြောင့် မြှောက်ဖော်ကိန်း ၁.၂ ကိုသုံးပါမယ်၊
R = þL/A = 0.0216 µOhm-m x (1.2 x 40 m) /4sqmm = 0.259 Ohm
Burden of CT = burden of cable + burden of relay
= ( 0.259 Ohm + 0.02 Ohm ) x (5 A) x(5 A) = 6.98 VA
ဒါကြောင့် CT ရဲ့ Rated Burden အဖြစ် 10 VA ကို ရွေးလို့ရပါတယ်။
CT ရဲ့ Rated Burden ကို ကြီးကြီးရွေးရင်ရသလို၊ ဈေးလဲ ပိုကျသင့်လာပါမယ်။
ရွေးချယ်တဲ့ CT ရဲ့အချက်အလက်တွေက 300/5 A, 5P20, 10 VA ဆိုပါစို့၊
ရွေးချယ်ချက်အရ Rated Accuracy Limit Factor က 20 ဖြစ်သော်လည်း၊ Actual burden က 6.98 VA သာဖြစ်လို့ Actual Accuracy Limit Factor ပြန်တွက်ကြည့်ရပါမယ်။
Rated Accuracy Limit Factor = Fn = 20
Rated Burden of CT = Sn = 10 VA
Actual Burden of CT = Sa = 6.98 VA
Internal burden of CT secondary = Si = 0.07 Ohm x (5A) x (5A) = 1.75 VA
Actual Accuracy Limit Factor = Fa = Fn x (Si + Sn) / (Si + Sa)
= 20 x (1.75 + 10) / (1.75 + 6.98)
ဒီအဖြေအရ Accuracy Limit Factor 20 ကိုသုံးထားသော်လည်း လက်ရှိ burden အရ Actual Accuracy Limit Factor က 26.9 ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် Primary side မှာ Rated Current ရဲ့ 26.9 ဆထက် ပိုစီးချိန်အထိ Secondary Current ဟာ အချိုးကျ မှန်အောင် တိုင်းပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် CT secondary မှာ တကယ်ရှိနေမယ့် burden ငယ်လေ၊ Actual Accuracy Limit Factor ပိုကောင်းလာလေဖြစ်ပါတယ်။
CT ရဲ့ Rated Secondary Current ကို5A အစား 1 A သုံးမယ်ဆိုရင် Actual Burden တန်ဖိုး ၂၅ ဆ ပိုငယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
CT ရဲ့ Secondary မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ တိုင်းတာရေးပစ္စည်းများ(Measuring Equipment) ၏ Burden တန်ဖိုးနမူနာများကို အကြမ်းဖျဉ်းသိနိုင်ဖို့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပြီး တကယ်သုံးမယ့် ပစ္စည်းများ၏ Burden တန်ဖိုးကို စစ်ဖို့လိုပါတယ်။
Device Type Max. VA per Circuit
Ammeter Electromagnetic 3
Transducer Self-powered 3
External powered 1
Energy Meter Induction 2
Watt-meter, Var-meter 1
Maximum Demand Meter 3
CT ရဲ့ Secondary မှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ Protective Relay များ၏ Burden တန်ဖိုးနမူနာများကို သိနိုင်ဖို့ အသုံးများနေသော Micom Relay များကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပြီး တကယ်သုံးမယ့် ပစ္စည်းများ၏ Burden တန်ဖိုးကို စစ်ဖို့လိုပါတယ်။
Device Relay Code Max. VA per Circuit
1 A 5A
Overcurrent relay P111 < 0.2 < 0.2
O/C E/F relay P120-P123, P125-P127 < 0.025 < 0.3
O/C E/F relay P141-P145 < 0.04 < 0.01
Distance relay P441-P445 < 0.04 < 0.01
Distance relay P430C, P432, P433, P435-P439 < 0.1 < 0.1
Current Differential P521 < 0.025 < 0.3
Transformer Differential P630C, P631-P634, P638 < 0.1 < 0.1
Bus bar protection P741-P743 < 0.04 < 0.01
CB Fail protection P821 < 0.025 < 0.3
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 9:30 AM